व्यवस्थापिका–संसद सञ्चालन गर्न आवश्यक गणपुरक सङ्ख्यासम्बन्धी नियम मिचेर मङ्गलबार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसदको कार्यबाही अघि बढाएको घटना नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा सदैव कलङ्कको रुपमा रहिरहनेछ। संसद चलिरहँदा कोही एकजनामात्र सांसद पनि उठेको अवस्थालाई संसद अवरोध मानिने प्रचलनको बर्खिलाप गर्दै संसद–सदस्यहरूले नाराबाजी गर्दै गर्दा समेत सभामुखले विधेयक पारित भएको घोषणा गरिन्। यो प्रजातन्त्र र विधिको शासनको उल्लङ्घन र अपमान हो।
संसदभवन भित्र जम्मा १२९ जनामात्र सांसदहरू सहभागी भएको बेलामा सभामुखले १५१ जना सांसद सहभागी भएको झूट बोलेर विधेयक पारित भएको घोषणा गरिन्। संवैधानिक निकायको प्रमुख पदमा आसिन व्यक्ति समेतले यसप्रकार झुठ बोलेर जबरजस्ती आफ्नो मनोमानी लाद्नु लोकतन्त्रविरोधी कदम हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा संसदलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबभन्दा उच्चतम थलो मानिन्छ। सदनभित्र सांसदहरूले बोलेका कुराको तत्काल सम्बोधन हुनु र त्यसबापत कुनै मुद्दा नचल्ने बन्दोबस्त नै लोकतन्त्रको सर्वोत्तम पक्ष मानिन्छ। संसद सांसदहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्गको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने संवैधानिक थलो हो। तर जब कुनै संसदमा सांसदहरूको कुनै सुनुवाइ हुँदैन बरु चर्को नाराबाजीबीच पनि जबरजस्ती कुनै पनि कानुन पारित गरिन्छ भने लोकतन्त्रको नाममा पाखण्ड सावित हुनेछ।
लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दरतम पक्ष भनेको विचारको कदर हुनु हो भन्ने मान्यता छ। तर संवैधानिक निकायको प्रमुखले कानुनी रुपमा कोही सांसदले उठाएको कुराको सम्बोधन नगरी झूटको आडमा विधेयक पारित गर्छन् भने संसदको नाटक किन जरुरी भयो र? कुनै दल विशेषको पार्टी कार्यालय वा कसैको निवासमा बैठक बसेर आफूले खोजेको विधेयक पारित गर्दा के समस्या हुन्छ र? अब कम्तीमा सभामुख ओनसरी घर्तीले कुनै पनि सन्दर्भमा लोकतन्त्रको शब्दोच्चरण गर्नु अनैतिक हो।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सभामुख सरकारलाई निरङ्कुश बन्न रोक्ने शक्तिकेन्द्रका प्रमुख हुन्। कार्यपालिकालाई अधिकार दिने कानुनबाट सकभर देश र जनताको अहित नहोस् भन्ने विषयमा सभामुख सदैव सजग बन्नु पर्ने हो। त्यसकारण सदनबाट पारित हुने कुनै पनि विधेयकमाथि विभिन्न कोणबाट छलफल गराउनु सभामुखको कर्तव्य हो। तर मङ्गलबार सभामुख घर्तीमगरको प्रस्तुति आफै कार्यपालिका सदस्यको जस्तो देखियो। सभामुख पद राजनीतिक पार्टीबाट पूर्ति हुने पद भए तापनि पदासीन भएपश्चात् सभामुख दलभन्दा माथि बस्न जान्नुपर्दछ। तर घर्तीमगरको रवैया हिजो उनी संलग्न रहेको माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारलाई टेको दिने खालको थियो। तसर्थ सभामुखको व्यवहार शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति चुनौती हो र लोकतन्त्रमाथि निरङ्कुश मानसिकताको हमला हो।